सभामुख निरंकुश भए अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ - नवलपुर प्रेस
नवलपुर प्रेस ३५१ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख १९, आईतबार (५ महिना अघि)
वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीमाथि परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने भनिएको दिन कुनै दलका सांसद हराएको भन्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि विशेष अधिवेशनको बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सञ्चालनको नियमावली हुन्छ । त्यही नियमावलीमा टेकेर प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन्छ, कार्यसूची तयार हुन्छ । सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बनाइएको छ । प्रदेशसभा बैठक शुरु हुनुअघि त्यही समितिमा सभामुखसमेत बसेर कार्यसूची बनाउने हो । बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने, बीचमा समय राख्ने कि स्थगित गर्ने कि भन्नेजस्ता यावत विषयमा समितिमार्फत निर्धारण हुने हो । प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार समितिमा सहमतिबिना कुनै पनि संसद बैठकको कुनै कार्यसूची अगाडि बढाउने संसदीय अभ्यास हुँदैन । यसअघि पनि विशेष अधिवेशन भइसकेका कारणले त्यसको अभ्यास र नजिर पनि हेर्नुपर्छ ।
यसपटक अविश्वासको प्रतावमाथि बोलाइएको विशेष अधिवेशन हो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गरी टुंग्याउने सहमति अनुसारै कार्यसूची बनेको हो । बीचमा कोरोना महामारी निषेधाज्ञा पनि जारी भएकाले कोभिडको परीक्षण गरेर मात्रै विशेष अधिवेशन अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सरकारको तर्फबाट र दलको तर्फबाट पनि भनिएको हो । १३ गते बैठक शुरु गर्दा एजेण्डामा प्रवेश गरेर स्वाब परीक्षण गरेर बैठक चल्ने होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, त्यसको बारेमा कुनै पनि कुरा नआएको हुँदा शुरुमा नै ध्यानाकर्षण गरायौं । भोलिपल्ट त होला भन्ने ठान्यौं तर परीक्षण बिनै लैजान लागिएपछि संसदीय परम्पराअनुसारै उठेर विरोध गरौं र बैठक स्थगित भएर स्वाब परीक्षण गरेपछि अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । १५ गते नै टुंग्याउने भनिएको थियो, स्वाब परीक्षण गर्दा एक दिन ढिला भएकाले बरु १६ गते छलफल सकेर मतदान गर्ने हाम्रो कुरा थियो ।
१५ गते छलफल शुरु भइसकेपछि अचानक २० मिनेट बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यही २० मिनेटमा सांसद हराएको निवेदन दिन लगाउने र सुनियोजित ढंगले नै सूचना टाँसेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरियो । २० मिनेट भनिएको आधा घन्टा, १ घन्टा लम्ब्याउने विशेषाधिकार सभामुखलाई हुन्छ । तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबिनै सूचना टाँस गरेर सभामुख हिंड्नुभएछ । जुन काम सभामुखले गर्नुभयो, यो संविधानमा पनि लेखिएको हुँदैन । यसरी संसदलाई लिकभन्दा बाहिर लैजाने काम सभामुखले गर्नुभयो ।
संसदीय अभ्यासअनुसार, प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार र अहिलेसम्मको पराम्पराभन्दा बाहिर गएर सभामुखले गैरजिम्मेवार भएर मतदानको अवस्थामा गइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने भयो भनेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो । नियतवस विशेष अधिवशनलाई हत्या गर्ने काम गर्नुभयो । फेरि विशेष अधिवेशन त्यही अवस्थामा डाक्न टेक्ने कुनै नीति नियमै छैन । भोलि बैठक डाकेर फेरि मतदान गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने भयो भने फेरि स्थगित भयो भनेर हिंड्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो पक्षले जित्नैपर्ने यसले नजिर स्थापित गर्छ ।
अधिवेशन टुंगिएको घोषणा पनि भएको छैन र अब अविश्वासको प्रस्ताव ब्युँताएर अगाडि ल्याउने अवस्था पनि छैन । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव मरिसक्यो र काजकिरिया मात्र हुन नपाएको अवस्था हो । यसले प्रदेशसभालाई अस्थिरतामा लग्यो । भोलि बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने छ । त्यसअघि विशेष अधिवेशन ब्युँताउन कुन आधारले सहमति गर्ने र कुन कानूनअनुसार गर्ने ? सभामुखले बिना सहमति बैठक डाकेर कसैलाई हराएर, कसैलाई जिताउन कसरी सक्नुहुन्छ ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेले म फिर्ता गर्छु भन्नलाई प्रदेशसभा बैठक बस्ने स्थिति पनि छैन । जसले अब प्रदेशसभालाई अस्थिरता र जटिलतामा धकेल्यो ।
संसदीय प्रणालीमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन पनि सक्छ नि । कसैलाई अनिच्छा लाग्छ भने अनुपस्थित हुन पाउँछ । कसैले खुला रुपमा राजनीतिक ढंगले निर्णय गर्छ र कसैले अर्को बाटो रोज्छ । शतप्रतिशत सांसद उपस्थित हुनुपर्छ भनेर लेखिएको पनि छैन । कोही हार्ने भयो भनेर संसद स्थगित गर्ने होइन, स्थगित गर्ने प्रक्रिया नै अर्कै छ । भोलि कोही अनुपस्थित होला र अर्काले हरायो भनेर दिएको निवेदनलाई सदर गर्ने हो भने त संसद कसरी चल्न सक्छ ? हामी प्रत्येक दिन सांसद हराएको निवेदन दिन्छौं । सभामुख भन्नै नसुहाउने व्यक्तिलाई सभामुख बनाइएको रहेछ ।
अब कि दलीय सहमतिमै जाऔं, दुई वर्ष प्रस्ताव ल्याउँदैनौं भन्नुपर्‍यो । नत्र पारित हुने अवस्थामा अधिवेशन बोलाउँछु भनेर हामी मान्दैनौं । अब सबको हैसियत हेरौं । एमाले, माओवादी, कांग्रेस सबको हैसियत हेरौं । पक्षपाती सभामुखले बाइपास गरेर निरंकुश ढंगले बैठक डाक्छन् भने सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल पनि चुप लागेर बस्छ होला र ? सभामुख निरंकुश हुन मिल्छ ? अहिलेसम्म सरकारले त केही विधिको शासन मान्नुपर्छ भनेर संसदलाई कुनै हस्तक्षेप गरेकै छैन । सभामुखको अब टेक्ने कुनै कानून छ र ? सरकारलाई सेटिङ भनिरहेका छन्, सेटिङ त विपक्षी दलले गरेका रहेछन् नि सभामुखमार्फत विशेष अधिवेशनको बैठक अनिश्चितकालका लागि अन्त्य गराएर । त्यसैले अब प्रदेशसभा जटिल मोडमा छ ।
अहिले माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर प्रष्ट रुपमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा जान मिल्छ भने दीपक मनाङे पनि मन्त्री बन्न किन नपाउने ? संसदीय प्रणालीमा सरकार निर्माण र विनिर्माणमा यसलाई जायज नै मानिन्छ । उनी दलको नभएर स्वतन्त्र सांसद नै भए पनि मन्त्री बन्न कुनै बाधा हुने कुरा त होइन । मनाङे स्वतन्त्र सांसद हुन्, उनीलाई भेटेर छुट्टै कुर्सी माग गर्न लगाएर खेल्ने काम भएको रेकर्ड पाएपछि हामीले पनि निर्णय गर्‍यौं । उनीहरुले लगेर सत्ता ढलाउँदा जायज हुने र हामीले ल्याएर सत्ता जोगाउनै सही मन्त्री बनाउँदा कसरी बेठीक हुन्छ ?
खिमविक्रमको विषय हामीसँग सम्बन्धित नै होइन । पहिलेदेखि नै मसालभित्र ठूलो असन्तुष्टि छ । म पहिले बागलुङको समेत इन्चार्ज हुँदा पनि बागलुङमा मसाललाई जिताउँदै आएका हौं । बागलुङमा कहिल्यै पनि हामीले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्न पाएनौं । राष्ट्रिय रुपमा र अन्य जिल्लामा जे भए पनि बागलुङमा मात्रै छुट्टै चुनावी एकता हुन्थ्यो । उहाँहरुले जिन्दगीभर कांग्रेससँग लड्यौं, ज्यान मार्ने उद्योग लगाएर अझै पनि दजनौं हाम्रा मान्छे कांग्रेसका कारण भूमिगत छन् भन्नुहुन्छ । अनि कांग्रेसलाई कसरी भोट हाल्ने भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला । त्यसमाथि खिमविक्रमजीमा कोभिड पनि देखियो ।
िवपक्षी दललाई जनमोर्चाले भोट हाल्छ भन्ने लागेको हुँदा अनि अनुपस्थित हुँदा अरुलाई दोष लगाउन पाइन्छ ? मतदान गर्ने प्रक्रियामै गएको भए साँच्चिकै केही रहेछ कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो तर प्रक्रियामै नगई आरोप लगाउनुको आधार छैन । एमालेकै पनि सबै सांसद उपस्थित थिएनन् नि ।
गण्डकीका अर्थमन्त्रीको टिप्पणी